Nhau - Ungasarudza sei otomatiki Kuumbwa muchina?
How kusarudza otomatiki Kuumbwa muchina?
Kusarudzwa kwe otomatiki kuumbwa muchina kunofanirwa kuve kwakavakirwa pakufungisisa kwakazara kwezvinhu zvakawanda, senge:
(2) Kukanda zvinhu: zvakasiyana zvinhu zvekukanda zvine zvakasiyana zvinodiwa kune jecha kuomarara kuomarara. Kazhinji, simbi yakakandwa uye simbi yakakanda inoda zvakakwirira zvinodiwa pane zvisiri-ferrous alloys, uye ductile iron yakakura kudarika grey iron uye nyore kufonyoka simbi. Kune zvigadzirwa zvinoda kukwirira kwejecha kuomarara, nzira yekuumba ine yakakwira jecha muforoma compactness inofanira kusarudzwa.
(3) Maumbirwo mamiriro: Semuenzaniso, kana iyo yekukanda iine yakamanikana maburi, jecha rakarembera, gobvu rekubuda maburi, nezvimwewo, nzira yekuumba ine yakakwira muforoma-kudhirowa kurongeka uye yunifomu jecha muforoma compactness inofanira kusarudzwa.
(4) Kukanda kuburitsa, batch size uye dzakasiyana siyana: Kukanda kwakakura kuburitsa, hombe batch uye imwechete marudzi anofanirwa kushandisa yakakwira-kugona kana yakakosha kuumba michina; diki-batch uye yakawanda-dzakasiyana castings inofanirwa kushandisa yekuumba michina ine inoshanduka tekinoroji uye inyore yekugadzira sangano. Single chidimbu kugadzirwa zvakakodzera Chinyorwa Kuumbwa.
(5) Kukanda chimiro, saizi uye huremu: Kana mamiriro ezvinhu achibvumidza, castings ane akafanana maumbirwo, madiki misiyano muhukuru uye huremu anofanirwa kushandisa imwecheteyo yekuumba muchina. Izvi zvinonyanya kuitika kana bhokisi rejecha richifanira kuve rakagadzirwa nemabhanhire ebhokisi kufambisa kubatana kwejecha bhokisi.
(6) Zvinodiwa pakuumba jecha
(7) Midziyo yekugadzirisa yemusangano wekuenzanisira: Izvi zvinonyanya kukosha kana musangano wekare wavandudzwa. Inofanira kuve yakasanganiswa neyepakutanga mamiriro emusangano, kugona kwekugadzira kweimwe michina inotsigira (semavira, kurapwa kwejecha, nezvimwewo), danho rezvekugadzira, mamiriro ezvekufambisa, maitiro etekinoroji, nezvimwe. Ongorora nemaonero ehurongwa hweinjiniya kuti uone kuti ndeipi Kuumbwa muchina ndiyo inokodzera kuburitsa kubatsirwa kukuru kwekudyara.
(8) Mamiriro ekushandisa: Iyo yakaenzana kurongeka uye pamusoro peyakaomarara danho remuenzaniso inofanirwa kuenderana nesarudzo yekuumba muchina.
(9) Nesarudzo yekusarudza modelling michina inogona kusangana nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, hutsanana hwemaindasitiri uye kuchengetedzwa kwevashandi.
(10) Iyo yepamusoro-inoshanda yekuumba muchina inofanirwa kushandisa inoenderana yekuumba yekugadzira tambo uye haigone kushandiswa yega.
Richigadzirisa vachikanda chinu, Chinwiwa Mould Machine, Chinwiwa richigadzirisa, Punch Out Muchina, Sandbox, Semi-Automatic richigadzirisa Machine,